Baro sida walxaha 2D loogu qaabeeyo Inkscape si aad ugu abuurto mashiinnada CNC.
Si loo sameeyo shay leh qalabka wax lagu gooyo ama mishiinka CNC, waa in marka hore la qaabeeyaa. Waxay ku taal software-ka Inkscape, qalab il furan, in aad qaadi doonto tillaabooyinkaaga ugu horreeya qaabaynta 2D.
Waxaa ku wehelin doona a kooxda isku dhafka ah naqshadeeyayaasha, sameeyayaasha jaamacadaha (Magaalada Sayniska iyo Warshadaha iyo Palace of Discovery), injineerada IMT Atlantique iyo horumariyayaal ka socda bulshada Inkscape.
Waxaad ogaan doontaa aqoonta-sida farsamo yaqaan kuwaas oo dhijitaalka ku dara hab-abuurkooda iyo hab-soo-saarkooda. Waxaad yeelan doontaa aragti caalami ah oo ku saabsan habka wax soo saarka shay laga bilaabo qaabaynta 2D ee kombuyuutarka naqshadeeyaha, isticmaalka qaabka farsamada ama warshadaha.
Ku qaabaynta 2D oo leh Inkscape Diisambar 8, 2021Tranquillus
horeHorudhac ku saabsan histology: sahaminta unugyada jidhka bini'aadamka
socdaAmniga Shabakadda Kombiyuutarka